घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण प्रेम को एक प्रीमियर लीग लेजेन्ड ले सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा ज्ञात; "धुलो"। हाम्रो एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्य तपाईले उनीहरूको बचपनको समयबाट घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँको बारेमा धेरै र बन्द-पिच तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केहीले अलन शाररको जीवनीलाई धेरै रोचक छ भनेर विचार गर्छन्। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
एलन शेरर गोस्वरर्थ, न्यूकैसल मा टाइन, युनाइटेड किंग्डममा अगस्ट 13 को 1970th दिनको जन्म भएको थियो। उनी आफ्नो आमा, ऐन शेरर र बुबा, एलन शेरर स्नर (एक पाना-धातु कर्मचारी) मा जन्मिए। दुवै कामकाजी आमाबाबु थिए।
शारर को उनको पिता ले फुटबल खेलन को लागि प्रोत्साहित गरिएको थियो जब उनि स्कूल मा थिए। तिनी गोस्फर्थ सेन्ट्रल मिडिल स्कूल र गोस्वर हाई स्कूलमा पढाइएका थिए। आफ्नो गृहनगरको सडकमा खेल्दै, शेराकर मूलतः मध्य मिडियामा खेलेका कारण किनभने उनी प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न सकेनन् र यसैले खेलहरूमा अझ बढी भाग लिन्छन्।
उनले आफ्नो स्कुल फुटबलमा पङ्क्ति बढाए र स्कूल टोलीको कप्तान बन्नुभयो। उनको सफलता आयो जब उनले न्यूकैसल सिटी स्कूल टोलीलाई स्टेड जेम्स पार्कमा सात-ए-साइड टूर्नामेंट जिते। यसले उनलाई फुटबललाई अझ गम्भीर रूपमा लिन उत्प्रेरित गर्यो, यसैले एक किशोरको रूपमा Wallsend केटा क्लबको लागि साइन इन गर्यो।
यो Wallsend क्लब को लागि खेल्दै थियो कि उनले जैक हिक्सन द्वारा देखाएको थियो जो दक्षिणमप्टन को लागि स्काउउट थियो। ज्याक हिक्सनले शाररमा मन पराउँथे। उनले शाररलाई पश्चिम ब्रोमच Albion, मैनचेस्टर सिटी र न्यू क्यासल युनाइटेडको प्रथम डिभीजन क्लबको लागि सफल प्रयास गरेपछि उनलाई दक्षिणमप्टनको लागि सिफारिस गर्न बाध्य भए। बाकि, भिडियो तल तल चित्रण, अब इतिहास हो।
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
शारर लेनीयासँग विवाह गरेको छ, जसलाई उनले एक साउथामप्टन खेलाडीको रूपमा भेट्टाए।
जोडाले दक्षिणी तट क्लबमा शाररको दोस्रो वर्षको दौडान स्थानीय आमाबाबुलाई साथै बस्न थालेको थियो र 8 जुन 1991 मा शहरमा विवाह भएको थियो।
केहि को चित्रण को विपरीत WAGs (पत्नी र प्रेमिका) मीडियाको पछिल्ला खेलाडिहरु, ल्यान्याले शिररले शान्त र सुरक्षित व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरेको छ, आफ्नो पतिको प्रसिद्धिलाई सुन्न मन पराउँदैनन् कहिलेकाहीं।
एलन शेरर र बच्चाहरु
यस जोडीले तीन जना बच्चाहरू छन्; Hollie Shearer, Chloe Shearer र Will Shearer। तल एलन र उनको तीन बच्चाहरु को तस्वीर हो। तल एलन शेयर घरको फोटो हो।
एलन शाररको परिवार
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
एलन शेररसँग उसको व्यक्तित्वको निम्न विशेषताहरू छन्।
कमजोरीहरू: घोर, जिद्दी, आत्म-केन्द्रित, आलसी, असीमित।
लियो मनपर्छ: थिएटर, छुट्टिँदै, प्रशंसा गर्दै, महंगी चीजहरू, उज्यालो रंगहरू, साथीहरूसँग मजा।
मन नपराउनुहोस्: बेवास्ता गरिँदै, कठोर वास्तविकताको सामना गर्दै राजा वा रानी जस्तै व्यवहार गरेन
सबै भन्दा माथि, एलन शेरर एक प्राकृतिक जन्मजात नेता हो। उहाँ नाटकीय, रचनात्मक, आत्म-भरोसा, शक्तिशाली र विरोध गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ। उनी जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त गर्न चाहने केहि हासिल गर्न सक्षम छन्। यसको उदाहरण उनको मुख्य लीग गोल रेकर्ड हो।
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उहाँका लुक-एइक
एलन शेरर चलचित्र सेलिब्रिटी, ब्रूस विलियससँग नजिकको शारीरिक समानता बन्छ। वाल्टर ब्रूस विलिस एक अमेरिकी अभिनेता, निर्माता र गायक हुन्। उनको क्यारियर अफ-ब्र्रोडवे स्टेसनमा र त्यसपछि 1980s मा टेलिभिजनमा सुरु भए, विशेष गरी डेभीड एडिसनमा चन्द्रलाइटिङमा।
एलन शेररको लुक-एइक
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -लुक
एलन शेररको धूप काँच उनको लागि एक प्रमुख सहायक हो। यो पहेलो र समुद्र किनारा शर्ट वरिपरि घाम लाग्दा Premiership Legend को लागि मनोरञ्जनको एक प्रमुख रूप हो।
एलन शारर - शर्टलेस र छायादार मानिस
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -माइक आशले संग मुद्दा
पूर्व न्यूकेसल अध्यक्ष फ्रेड शेर्पाले घोषणा गरे कि, केयरर पछि 2005-06 सीजन न्यूकैसलको क्यारेक्टर सहायक सहायकको रूपमा समाप्त भयो, त्यो क्लब बन्यो "खेलकुद राजदूत" 2006-07 सिजनको लागि।
तर, सेप्टेम्बर 2008 मा, यो रिपोर्ट गरियो कि शारर क्लब को मालिक माइक एशले ले यस ठूलो मात्रा मा सम्मानित स्थिति देखि हटाइएको थियो, उनको स्टीवन टेलर र डेमीन डफ को खिलाडिहरु को विरोध को बावजूद।
एलन शेररको मुद्दा माइक एशले- अनल्ट स्टोरी
माइक आशले उनलाई लुगा लगाइदिएपछि शिररको आलोचनाको परिणामस्वरूप क्यान्सर के्यानगनको प्रस्थान पछि क्लब चलाएको थियो। यो रिपोर्ट क्लब द्वारा अस्वीकार गरियो।
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पोस्ट सेवानिवृत्ति नौकरी
पोस्ट सेवानिवृत्ति, शारर बीबीसी को एक पंडित को रूप मा उनको काम को लागि सबै भन्दा राम्रो छ दिनको म्याच। पूर्व स्ट्राइकर शनिवारको रातमा देखाइएका सबै भन्दा प्रमुख अनुहारहरू हुन्, र एफए कप, युरोपियन च्याम्पियनशिप र विश्व कप खेलका लागि विश्लेषकको रूपमा देखा पर्दछ।
एक पन्डित को रूप मा उनको शुरुआती वर्ष मा अंतर्दृष्टि को कमी को लागि एक बार आलोचना गरिएको छ, तर देर देखि एक गर्म स्वागत को प्राप्त गरेको छ, जो उनले आफ्नो महत्वाकांक्षा को प्रबंधन मा जाने को त्याग को लागि तल राख्छ। "जब मैले पहिलो पटक [punditry] मा 2006 भित्र गए, मैले सधैँ महसुस गर्थें कि म व्यवस्थापनमा फर्कन चाहन्छु ताकि मैले आलोचना गर्नु अत्यावश्यक थियो जस्तो लाग्छ" उसले भन्यो अफ द बॉल.
शिरर जारी छ ..."तर एक पटक मैले चार वा पाँच वर्ष अगाडी जागरूक निर्णय गरे, म सम्भवतः खेलमा फर्कन लागेन। त्यसपछि म तल टाँस्दै थिएँ र मैले मेरो टाउको पण्डित्रीमा फसेको थिएँ। मैले विभिन्न मानिसहरूलाई बोलेँ, म बसेर पढें, मेरो समय मान्छे संग बोल्न र त्यसपछि, ढिलो हुन्छ तर साँच्चै, म यो मास्टर बन्छ। "
यो नोट गर्न उल्लेखनीय छ कि एलन शिरर कोचिंग मा केवल पूरै लामो समयसम्म थिएनन्। शेररले 2008-09 सीजनको पछाडि न्यूकैसलको प्रभारी लिनुभयो तर उनीहरूले राजनैतिकतालाई च्याम्पियनसिपमा बचत गर्न सक्दैन, सम्भवतः 24 बाट मात्र पाँच अंक कमाई।
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -उनको नेट वार्थ
यस अनुसार आइतबार टाइम्स रिच सूची, शिररको निवल मूल्य 36 मा £ 2013m थियो।
आफ्नो खेल दिनबाट आफ्नो कमाईको शीर्षमा, बीररको बीबीसीको साथको पहिलो अनुबंध पन्डितको रूपमा दिनको म्याच कथित रूपमा उनलाई एक वर्ष 500,000 पाउनुभयो। उहाँले 2016 मा नयाँ सम्झौता हस्ताक्षर गर्नुभयो र विदेशमा अन्य सञ्जालहरूमा पनि देखा पर्दछ, जस्तै बिन स्पोर्ट्स.
साथै, Umbro सँग एक स्वीकृति व्यवस्था जुन आफ्नो खेलकुदको अन्त्य भन्दा बाहिर दौडिएको थियो शेरर जेबले 1.33m वार्षिक रूपमा 2013 मा समाप्त भएको सम्म।
एलन शेरर बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रतिमा सम्मान
एलन शेयरको प्रतिमा सम्मान
न्यूकासलले एक्सएनएनएमक्सक्सको सेप्टेम्बरमा सेन्ट जेम्स पार्कको बाहिरको छेउको लागि मूर्तिको अनावरण गर्यो। यो आफ्नो महान गोल को स्कोर को रूप मा तल देख्यो को रूप मा रेकर्ड र मरे कठोर रवैया को सम्मान को रूप मा।
एलन शेररको म Die-Hard Attitude
पीतल स्मारक लागत £ 250,000 र त्यो क्लब खेलाडी एडीएफ शेफर्ड को परिवार को लागि भुक्तानी गरिएको थियो जबकि शेरर खेलाडी थिए।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: एलन शेयर पढ्नको लागि धन्यवाद बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी तथ्यहरू। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।